नारायणमान विजुक्छेको प्रचण्डलाई प्रश्न :यदी साच्चै प्रधानमन्त्री नबन्ने भए पार्टीभित्र झगडा किन गरेको त ? - साँचो खबर
नेपाल मजदूर किसान पार्टीका अध्यक्ष नारायणमान विजुक्छेले प्रचण्ड र माधवकुमार नेपाललाई प्रजातान्त्रिक पार्टी खोल्नु सुझाव दिनु भएको छ । आफ्नो कम्युनिष्ट पार्टी छाडेर प्रधानमन्त्री बन्नुहोस् भनेर गुहार माग्दै जानु आत्मसमपर्ण भएको पनि प्रष्ट पार्नुभयो ।
प्रतिनिधिसभा पुनःस्थापनाको भोलीपल्ट सबै कार्यक्रम छाडेर प्रचण्ड–नेपाल देउवा निवास बुढानिलकण्ठ पुगेपछि विजुक्छेको भनाई आएको हो । ‘कांग्रेसलाई नै प्रधानमन्त्री बनिदिनु परो भनेर जानु भन्दा यता तिर कम्युनिष्ट पार्टी स्थगित गरेर कांग्रेस नै बने भइगयो नि’, उहाले भन्नुभयो, ‘शेरबहादुर देउवाको नेतृत्वमा जान खोज्नु के हो ? हे प्रभु शेरबहादुर जि तपाईले हामीलाई जोगाइदिनुहोस् भन्न खोजेको हो । त्यो त आत्मसमपर्ण हो । कम्युनिष्ट पार्टी कसरी आफुलाई दाबा गर्न सक्छन् तिनीहरुले । कांग्रेस आएर भनेको भए भिन्नै कुरा हो ।’
उहाले प्रचण्ड–नेपालले आफुहरु सरकार चलाउन नसक्ने अवस्थामा पुगेको घोषणा गरिसकेको पनि स्पष्ट पार्नुभयो । ‘हामी सरकार चलाउने अवस्थामा पुगेनौ तपाई नै सरकार चलाइदिनु पर्यो, तपाईको नेतृत्वमा हामी (प्रचण्ड–नेपाल पक्ष) आउछौं, भनिसक्नु भयो’, विजुक्छेको भनाई थियो । शेरबहादुर देउवालाई किन गुहारेको ? भनेर सो पक्षसँग उत्तर नरहेको पनि उहाले बताउनु भयो ।
प्रचण्ड र माधव नेपाल के कम्युनिष्ट हुन त ? भनि प्रश्न समेत उठाउनु भयो । कम्युनिष्ट पार्टी नभई पुँजीवादी पार्टी बनाए भने कांग्रेससँग मिलेकामा गुनासो गर्ने ठाउँ नहुने उहाले बताउनु भयो । ‘यिनीहरुले के स्विकार गर्नुपर्यो भने हामी कम्युनिष्ट होइनौं । हामी केटाकेटीमा लहलहैमा लागेर कम्युनिष्ट बनेका त्यही भएर हामी हाम्रो पार्टीको नाम परिवर्तन गर्छौं हामी प्रजातान्त्रिक के के जे सुकै नाम राखेर हामी पुँजीवादी पार्टी हो भनेर घोषणा गर अनिमात्र यो लायक कुरा हुन्छ । पुँजीवादी पुँजीवादी मिलेकोमा के गुनासो गर्ने’, उहाले भन्नुभयो ।
प्रचण्ड–नेपाललाई गाली गरेको नभई साचो कुरा भन्दिएको भन्दै यो जस्तो लजास्पद कुरा नहुने टिप्पणी समेत गर्नुभयो । प्रचण्डले प्रधानमन्त्री हुदिन भनेर घोषणा गर्नु अन्य दलको सहनुभूति खोजेको मात्रै उहाले बताउनु भयो । ‘प्रचण्डले प्रधानमन्त्री हुन्न भनेर घोषणा गर्नु भनेको सहानुभूति मात्रै खोजेको हो अन्य दलबाट । ल तपाई नै प्रधानमन्त्री बन्नुहोस् भनेर अन्य दलले भन्छन् कि भनेर सहानुभूति खोजेको हो उहाले’, विजुक्छेले अगाडी भन्नुभयो, ‘यदी साच्चै प्रधानमन्त्री नबन्ने भए पार्टीभित्र झगडा किन गरेको त ? प्रधानमन्त्री कै लागि झगडा गरेको साँचो कुरा त देखिसक्यो । दिन्छु भनको थियो दिएन भनेर उहाले भनिसक्नु भएको छ ।’